Abenzi bePallet yeTreyini kunye nabaXhasi | China Pallet Iinkuphelostencils Ifektri
Isikere senqanaba eliphezulu truck pallet, Le mveliso isetyenziselwa imisebenzi yokugcina izinto, iziseko zokuhanjiswa kwezinto, kwaye ikwalungele ukuhamba kwenkqubo kwiiwekhishophu, kwaye inokusetyenziswa njengeqonga lomsebenzi. Xa ukuphakamisa ukuphakama kungaphantsi kwe-300 mm, ilingana nokusetyenziswa kwetroli.PLC ukulawula ngokuzenzekelayo ukuphakamisa isikere pallet truck, Le mveliso sisixhobo ekufuneka sisetyenzisiwe kumzi-mveliso wokuprinta, nomsebenzi wokuziva ngokuzenzekelayo ukunyuka okanye ukuwa.
I-DAXLIFTER Brand Mini kagesi yamandla kaPallet Iinkuphelostencils yimveliso entsha esiyiphanda sayiphuhlisa. Ukulungiselela umthwalo wokothula izinto zokugcina izinto zokugcina umsebenzi kunye nomsebenzi ongaphandle wokulayisha umthwalo.Izona zinto zibalulekileyo kukuba inomsebenzi wokuhamba ophathwayo onamavili kunye nokuphakamisa kombane kunye nokuhla kwe-functio
I-China Manual Power Hand Trolley Lift Pallet Iinkuphelostencils sisixhobo sokugcina uqoqosho kwinto yonke ephatha amaShishini kunye nesuti kwindawo ethile yokugcina ayinayo indawo yamandla ombane eyaneleyo yokusebenzisa. phantsi,
Iphalethi yombane Iinkuphelostencils Kwinqanaba eliphezulu I-Daxlifter sisixhobo sokuphatha izixhobo ezikhethekileyo kulondolozo lwezinto zokubamba kunye nentshukumo.
Sebenzisa amandla ebhetri, akukho zintambo zifunekayo. Isikwere se-pallet scissor pallet, le yimveliso yezoqoqosho kwisuti ethile yokugcina ukukhanya. Nantoni na ephakamisa okanye ehambayo kufuneka isebenzise abantu ukutyhala okanye ukucofa. Esi sixhobo sisebenzisa uyilo olunzima, kwaye iivili zixhotyiswe ngezakhelo zokukhusela ukuthintela ukutyumka kwe-instep. Kwaye yamkela uyilo oluchasene ne-pinch kunye nomsebenzi wokukhusela ngaphezulu, othembeke ngakumbi kwaye ukhuselekile. Ukuthobela i-EN EN 1757-2 kunye ne-American ANSI / ASME imigangatho yokhuseleko.